Jesus Christ, anyị nanị olileanya, ọdịda nke mmadụ na Chineke na atụmatụ nzọpụta | Apg29
Jesus Christ, anyị nanị olileanya, ọdịda nke mmadụ na Chineke na atụmatụ nzọpụta
Ugbua na 1 Genesis 3, anyị na-ahụ otú Chineke na atụmatụ na-amalite na-udi.
The-apụghị ichetụ n'echiche ọnọdụ; Chineke n'onwe ya chụọ àjà nwa-aturu Jesus Christ bịara n'ihu. Ọ Scriptures kemgbe Pentateuch Àjà natu.
Nke a bụ akụkụ 1 nke a usoro nke 3 na akụkụ na-elu nke Fall, atumatu Chineke nke nzọpụta, ziri ezi, na Part 3 ga-obibi na ido nsọ nke na-eso ụzọ ngosi nke Jesus. Na nke a post, Part 1, m ga-ahụ Fall na atumatu nke Chineke nke nzọpụta site na nkwa nzọputa, na na mkpa nke àjà Old Testament, jikọrọ ọnwụ ịchụ àjà Jisọs.
Agwọ aghụghọ ụgha
1 Genesis 3 na-akọwa otú agwọ (ekwensu) ejisie nweta Adam na Iv mehie megide Chineke. Chineke na mbụ si Adam na 1 Genesis 2:17 "Ma nke osisi nke ihe ọmụma nke ọma na ihe ọjọọ ị ga-eri, n'ihi na n'ụbọchị ị na-eri ya na ị ga-anwụ." ​​Anyị na-agụ otú Eve ntị agwọ ahụ na-eduhie eduhie ụgha "Unu onwe-unu agaghi-anwụrịrị." O nyere na ọnwụnwa iri mkpụrụ ahụ a machibidoro iwu osisi, na ọbụna Adam mere ihe ọnwụnwa. Nakwa ná mmehie ya, isi megide Chineke, ya mere, ha na-akpa, ha nwụrụ n'ụzọ ime mmụọ, na ugbu a, ha guzo n'ebe ọtọ, unclothed.
M na-eche nudity tumadi lekwasịrị anya na enweghị Chineke otuto. Ndị Rom 3:23 "Mmadụ niile emehiewo ma eru ebube Chineke." Na Mkpughe 3:18, anyị na-agụ banyere nudity, na ọ bụrụ na oku na-aga ịzụta ọcha uwe kpuchie onwe. 1 Gen 3 kọkwara otú Adam na Iv mgbe Fall, nụrụ ihe Chineke na-eje ije n'ogige, na otú ha zoro site na ya.
Mgbe Chineke gwara Adam, "Olee ebe ị nọ?" Ọ ga-asịkwa, "m nụrụ olu-gi n'ogige, na m egwu n'ihi na m gba ọtọ. M zoo onwe m. "Mgbe ị na-agụ nke a ederede, anyị na-ahụ ndị kasị njọ nke na-esi nke mmehie. Udo n'etiti Holy Chineke na mmadụ na-agbaji. Gịnị a nnukwu mgbu a agbajikwa obodo ga emewo ọbụna n'ihi na Chineke!
Ọ bụghị nwere ike nwoke ma ọ bụrụ na ọ na-chọrọ, ma ugbu a, o mere ya. Ọ chọrọ ka a ná mma nwoke, dabeere na ya nwere free nhọrọ. Nke a dị ná mma na-akọwa David ke Psalm 25:14, "Jehova hobnob na ndị na-atụ egwu ya, ọgbụgba ndụ ya na-emekwa ka ha mara." Ya mere anyị na-ahụ otú mmehie kpatara na ọnwụ bịara n'ụwa.
Na Rom 5:12 anyị na-agụ, "Ya mere, dị ka site na otu onye mmehie bata n'ụwa, ọnwụ esitekwa ná mmehie, ọnwụ wee si otú bịara ka mmadụ niile, n'ihi na ihe niile emehiewo."
Atụmatụ Chineke na-amalite na-udi
Ugbua na 1 Genesis 3, anyị na-ahụ otú Chineke na atụmatụ na-amalite na-udi. Anyị na-agụ banyere otú Chineke na-enye a nkwa nke na-abịa nzọpụta, nwaanyị ahụ na ụmụ na-ezo aka Jesus Christ. "Ọ ga-etipịa gị isi," Chineke na-ekwu na agwo. Na Mkpughe 20 anyị na-agụ nke Kraịst definitive mmeri agadi agwọ, onye bụ otu ihe ahụ dị ka ekwensu. Sin bụ mgbe ahụ ka nke iche Chineke na mmadụ.
Anyị na-ahụ na Pentateuch, karịsịa 3 Genesis otú Chineke na-ahọrọ na-agụnye tara, n'etiti ndị ọzọ àjà mmehie na àjà ikpe ọmụma mgbe ụfọdụ ndị Izrel iji kpuchie mmehie ha. Ndị a metụtakwara ndị na-atụ atụ Jizọs Kraịst na ọnwụ ịchụ àjà maka anyị hà. Mgbe John ebe John 1 kwuru mgbe ọ na-ahụ Jesus "Nwa Atụrụ Chineke," mgbe ọ na-ekwu na ndị na-maara echiche na chụọ àjà nwa-aturu na mmehie.
The-apụghị ichetụ n'echiche ọnọdụ; Chineke n'onwe ya chụọ àjà nwa-aturu Jesus Christ bịara n'ihu. Ọ Scriptures kemgbe Pentateuch Àjà natu. Aịzaya buru n'amụma na-nzọputa n'Isi nke 53, "Ọ unan mmebi iwu anyị, echifịa maka anyị iniquities. The ntaramahụhụ bụ Ya ka anyị nwee udo, na site ọnyá ya na anyị na-agwọ. Anyị nwere ihe nile kpafuru akpafu dị ka atụrụ, nke ọ bụla wee n'ụzọ nke ya, ma ihe niile anyị ụgwọ, ka Jehova na ya. E tiri ya, ma o wedara onwe ya ala wee meghee bụghị ya ọnụ. Dị ka nwa atụrụ na-na-ada ka egbu ya, dịkwa ka a atụrụ nkịtị tupu ya nākpacha aji anu ya, n'ihi ya o meghere ya ọnụ. "
Ụbọchị mkpuchi mmehie
Ma ndị 3 mos 16 na Hibru 9 anyị na-agụ nke oké n'Ụbọchị Mkpuchi Mmehie, ụbọchị mgbe nnukwu onye nchụàjà otu ugboro n'afọ banyere Nsọ Kachasị Ebe Nsọ Nile na ọbara nke àjà mkpuchi mmehie maka ha onwe ha na maka ndị mmadụ mmehie. Na Hibru 9 anyị na-agụ otú Kraịst niile banyere Nsọ Kachasị Ebe Nsọ Nile na heaven jiri ọbara ya, ma merie ebighị ebi sitere na Bible. Anyị na-gbapụtara mmehie anyị site na Jizọs Kraịst ghọrọ anyị àjà mmehie! Ọ na-agwa otú Kraịst chụrụ onwe ya nye Chineke n'enweghị mmerụ. Amaokwu nke 22 na-ekwu na "iwu wepụchara fọrọ nke nta niile na ọbara, na nwusi obara na-dịghị kwụsịtụkwara."
Site ọnwụ ịchụàjà ya, Jizọs wee banye n'ime eluigwe n'onwe ya ịpụta n'ihu Chineke maka anyị. Hibru 10:19, 20 "Ụmụnna m, site n'ike nke ọbara Jizọs, anyị nwere ike ugbu a obi ike na-aga n'ime nsọ kachasi ebe nsọ nile, ọhụrụ na ndụ bụ nke o megheere anyị site ákwà, ya bụ, anụ ahụ ya." The ákwà nke temple , ọ bụ oké ákwà nke kewapụrụ nsọ si kasị nsọ. Dị ka ogologo oge dị ka ákwà ka nọ n'ebe ahụ, n'ihi ya, ọ nọchiri anya ndị ozugbo ụzọ n'ime nsọ kachasi ebe nsọ nile, Chineke n'onwe ya na-emeghe ma free niile.
Mgbe Jizọs nwụrụ n'obe, na-na ọ na-kọwara otú ákwà wupu si n'elu na ala. Ndị mmadụ pụrụ ugbu a na-ebi nso udo na Chineke ọzọ, ekele Jesus Christ, ma ọ bụrụ na ha kweere na ma nabata Ya dika Onye Nzọpụta ha na Jehova. The Bible na-ekwu na Mkpughe 21 na otu ụbọchị, a ga-a ọhụrụ heaven na ụwa ọhụrụ, a mgbe Chineke n'onwe ya ga-eso ndị ahụ na-anọ na ha. A mweghachi nke mmehie na-ebibi mmetụta, ga-site na Jizọs Kraịst na-Ya zuru mmeri. N'ụbọchị ahụ, ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n'anya anyị n'anya. Ọnwụ agaghị adị ọzọ, abughi iru uju, ma ọ bụ na-eti mkpu, ọ dịghịkwa ihe otiti.
Anyị maara site 1 Ndị Kọrint 15:24, 25, na ụbọchị ga-abịa mgbe Kraịst ga-akụri ma na-etinye njedebe ndị ajọ omume nile agha na ike na ọchichi. All iro ga-etinye n'okpuru ụkwụ ya (cheta nkwa na 1 Genesis 3 banyere otú agwọ isi kụrisịa site na nwaanyị ụmụ bụ Jizọs Kraịst). Amaokwu nke 26 nke 1 Kọrint 15 na-ekwu, "The iro ikpeazụ ọnwụ na-efunahụ nke ike nile."